बिमिस्टेक राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यास : नेपाल किन पछि हट्यो ? – मुलधार न्युज
Home > समाचार > बिमिस्टेक राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यास : नेपाल किन पछि हट्यो ?
२९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०७:३७
काठमाडौं – प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री २४ साउनदेखि बिदामा बस्नुअघि रक्षा मन्त्रालयले तीस सैनिकलाई भारतको पुणेमा हुने सैन्य अभ्यासका लागि पठाउने जंगी अड्डाको प्रस्ताव सदर गरिसकेको थियो ।
क्षेत्रीले २३ साउनमा सकल दर्जालाई गरेको सम्बोधनको बुँदा नम्बर ४८ मा सैन्य अभ्यासमा सैनिक सहभागी हुने सार्वजनिक गरे । भारतीय सेनाले पठाएको निमन्त्रणा साथमा राखेर अभ्यास सहभागी हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने जंगी अड्डाको रायलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वीकृति दिए ।
२५ देखि ३० भदौसम्मको सैन्य अभ्यासका लागि पाँच अधिकृतसहित ३० सैनिक छानिए । अन्तिम दिन ३० भदौमा आयोजना हुने बिमस्टेक सम्बद्ध सेना प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागी हुन प्रधानसेनापति सहभागी हुने सम्बन्धी प्रस्ताव रक्षामन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठायो ।
तर, बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनपछि उत्पन्न घरेलु र बाह्य दबाबबीच सरकारले तीन सदस्यीय पर्यवेक्षक मात्रै सहभागी गराउने निर्णय गर्‍यो ।
नरेन्द्र मोदीले १४ भदौमा बिमस्टेक चौथो सम्मेलनको उद्घाटन शत्रमा गरेको करिब १५ मिनेट सम्बोधनमा यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सन्दर्भ कोट्याएर शान्ति र सुरक्षामा जोड दिए । उनको भनाई थियो, ‘हिमालय र बंगालको खाडी जोड्ने हाम्रा देशहरुले पटकपटक प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहेका छन् ।
कलिहे बाढी कहिले सामुन्द्रीक आँधी त कहिले भुकम्पपछि उद्दार तथा मानवीय सहायता प्रयासमा हामीबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक छ । आगामी महिना भारतमा आयोजना हुने बिमस्टेक मल्टी नेशनल मिलिटरी फिल्ड तालिम तथा अभ्यास अनि स्थल सेना प्रमुखको कन्क्लेभमा म हृदयपूर्वक स्वागत गर्दछु ।’
त्यसपछि विरोध शुरु भयो । शुरुमा प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, जंगी अड्डा सबैले सैन्य अभ्यासका बचाउ गरे । तर चीनसँग पारबहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा मध्यरारतमा सहमति भएसँगै उनीहरुको बोली परिवर्तन भयो । यो संयोग थियो वा पूर्वनिर्धारित परिस्थिति भन्ने यकिन हुन बाँकी छ ।
यी सबै परिघटनाबीच प्रधानमन्त्रीले सेना नपठाउने निर्णय गरे । त्यसबेला रक्षामन्त्री पोखरेल लेबनान र पोल्याण्डको भ्रमणमा थिए । तर, तीन जना पर्यवेक्षक पठाएर सरकारले भारतसँगको सम्बन्धमा ड्यामेज कन्ट्रोल गरायो । एक पकट निर्णय भइसकेको विषय विरोधका बीचमा उल्ट्याउनु परिपक्वता मानिँदैन ।
नेपाली सैनिक भारतमा जाने कि नजाने भन्ने बहस चलिहेका बेला भदौ २० गते २३ राष्ट्रका गुप्तचर सैन्य प्रमुखको सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो जसको आयोजक नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्ड थियो । २३ राष्ट्र सम्मिलत यो यो दक्षिण एशियाकै पहिलो सम्मेलन थियो ।
नेपालले भारतीय आयोजनाको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हँदा विरोध गरेका हाम्रो सुरक्षा मामिला विज्ञहरु अमेरिकी सेनासँग मिलेर आयोजना गरेका यो र यस्ता सैन्य अभ्यास बारे मौन छन् । नेपाली सेनाको विशेष बाहिनीअन्तर्गत रेन्जर गण अमेरिकी सेनाले बनाइदिएको हो । त्यो अमेरिकी सेनाको युनिट जस्तो छ । जसलाई युद्धकालमा माओवादीले शाही अमेरिकी सेना भन्थे । यसको औचित्य के छ ? नयाँपत्रिकाबाट